Xog: Dawladda Somalia oo u ololanaysa in C/raxmaan Faroole Madax looga dhiga Guddi Heer Qaran ah. – Hornafrik Media Network
Dawladda Somalia ayaa u ololaynaysa in C/raxmaan Faroole oo ka mida Aqalka Sare ee Somalia uu noqdo Guddoomiyaha Guddiga Labada Aqal ee Baarlamaanka u qaabilsan Dastuurka Somalia. Waxaana arrintan si wayn ugu xusul duubaya Raiisul Wasaare Khayre iyo Madaxwayne Farmaajo.
Illo lagu kalsoon yahay ayaa Hornafrik u sheegay in dhawaan la qaban doono doono Doorashadda Guddoomiyaha Guddigaasi, iyadoo aysan jirin Musharixiin la tartamaysa hadda oo Miisaan leh. isla markaana uusan jirin Waqti ay Musharixiinta kale ku diyaar garoobi karaan, iyo Dhaqaale ku filan toona, halka C/raxmaan Faroolana uu ololihiisa haatan ba socdo.
Diblomaasiyiinta Beesha Caalamka ee Farsamo ahaan iyo Dhaqaale ahaanba gacan ka gaysta Dastuurka Somalia sidii Qabyadda looga saari lahaa ayaa arrintan walaac wayn ka muujiyay. waxayna ku tilmaameen mid dib u dhac ku keenaysa Higsaga Somalia ee ah inay dhacdo Doorasho qof iyo Cod ah 2020-ka.
Faroole ayaa markii uu Madaxwaynaha ka ahaa Puntland waxa uu caqabad ku noqday in Dastuur dhamaystiran ay Somalia yeelato, taasoo sababtay in caqabadaasi ay keenaan in Dastuurka Dalka uusan ka bixin KMG, hadda oo la qorshaynayo in Dastuurka oo dhan isaga Guddi uu Madax u yahay ay Go’aan ka gaaraan waxay caqabad ku noqon kartaa in Somalia ay yeelato Dastuur la isku waafaqsan yahay.
Dawlad Goboleedyadda ayaa iyaguna durba arrintan walaac ka muujiyay, waxayna kula balameen Xildhibaanadda ku matala Labada Aqal inaysan aqbalin in Faroole uu Gudoomiye ka noqdo Guddiga Dastuurka ee Labada Aqal, iyadoo waliba Puntland oo uu Faroole ka soo jeedo ay qayb ka tahay Ololahan.
Baarlamaanka Somaliland oo Doortay Guddoomiye